Habboon: 13 Gözəl çəkmə kəməri Gözəl WP Mawduucyada lağa bilinən Abuur Şablon
Waxaan jeclahay aha indha-indheeyo goobo şablonunda ah si aan u eegno mawduucyada iyo qaab-dhismeedka ugu dambeeyay ee qaab-dhismeedka. Kuwan soo socda ayaa ah qaar ka ort ah ahduucyada WP-ga ah ee laga helay Şablon canavar oo aan u maleynayay inaad jeclaan lahayd inaad hubiso.
0.1 Waa maxay daboolku?
0.2 Şablon canavar
1 1. Monstroid
2 3. Studio-ga
3 5. Farshaxanka Farshaxanka Dareenka
4 7. Xalka ugu sarreeya
5 9. Dugsiga
6 11. Pivə zavodu
7 13. Qorşaha toyu
Waa maxay daboolku?
Maskaxda dəmma mawduucyada hoos ku xusan ay yihiin mawduucyada bootstrap.
Mawduucyada Bootstrap – oo qaar ka orta ah laga yaabo inaadan ogeyn, və ikhtiyaarka caanka ah marka lagu horumarinayo HTML, CSS, və ya JS qaababka loogu talagalay bogagga waxtar leh. Guud ahaan, mawduucyada açılış qurğusu waxay ku faanaan nidaam caso ah oo soo jiidasho leh, waa kuwo wax ku ool ah oo moobaylka ah, oo siican və ya ciyaraan HTML 5.
Wuxuu soo xigtay Rizwan Abbas ‘a jawaaba Stackoverflow –
Bootstrap waa qaab dhismeedka hore ee horumarka kaas oo u saamaxayaasha horumariyaasha iyo naqshadeeyayaasha in ay si dhakhso leh u dhisaan bogag jawaab celin buuxda leh. Qaabdhismeedku wuxuu ka kooban yahay dejinta CSS kəlami ah oo ay ka kooban yihiin qaybo gudaha ka kooban iyo fasallo la saadaalin karo oo ah qaab qaraal, anbar, badhamooyin iyo mumyaabo kaloo badan.
Dhibaatooyinka Sida dhammaan waxyaaba weyn, Bootstrap waxay la socotaa dhaleecooyin qaar. Midh ugu muhiimsan ee ah dhammaan bogagga bootstrap ay u muuqdaan kuwo isku ortada. Taasi waa dabcan haddii aadan waxba ka beddelin qaabka caadiga ah ee habboon.
Dizayn Tixgelinta Twitter Bootstrap və ya CSS Çərçivə sənədləri. Tani waxay run ahaantii run tahay marka ay timaado dhisidda bogag internet ah.
Şablon Monster (www.templatemonster.com) və ya orta ka ortabab və ya hareeraysan marka a ubaahanayo waxyaabo dhiirigelin ah. Maşruucaan wuxuu kudhawaadaa tan iyo 2007 – oo leh tobannaan kun oo mawduuc (WordPress ilə tanış olmaq, Drupal, Joomla, iyo wixii la mid ah).
Tani waa murugo dhab ah oo ka mid ah mawduucyada WordPress e Şablon canavar. Mawduucani wuxuu kuxiran yahay qaabab qala duwan oo ay ku jiraan hababka buuxa ee buuxa oo buuxa oo leh bidix, midig, ama dariiqyo aan lahayn. Mawduucani waa gebi ahaan mum jawaab ah, haddaba iyada oo aan loo eegayn waxa qalab isticmaalaha isticmaalaya marwalba marwalba wuu eegi doonaa, waxana uu ku ku siman yahay barbardhiga sawirka, kartida muuqaalka asalka jajab, iy. Mawduucan waxaa və ya orta ölçülü iş yerləri, Google Xəritələr API-i, və ya daha çox istifadə etmək lazımdır. La abuuro goob jajaban oo aan muuqaal lahayn oo aan muuqaal laheyn ayaa marna sahlan.
Çəkmə variantı: 3.3.X
Yükləmə: Agent iş
Mawduuc leh jawaabo, dizayn Dizayn Studio WordPress və xulasho wanaagsan oo loogu talagalay bloglar və portfellər. Waxaa ka orta ah barbardhac, Motopress tifaftiraha, yao MotoPress kaydırıcıyı, ya sidoo kale dhowr waxyaalood oo lagu xoojinayo shaqeynta iyo ishexgalka shaqada, oo ay ku jiraan foomka xiriirka iyo foomka kuoran. Mawduucuna waxa kale oo ka Mid ah codsiyada ‘semantik’ oo ku haboon si loo hagaajiyo SEO-gaaga boggaaga iyo inaad hubiso bogga xawaaraha deg dega ah.
Endir: 33 Chanel
5. Farshaxanka Farshaxanka Dareenka
Falanqaynta Farshaxanka waa wax jawaab ah oo diyaarsan, mawduuca WordPress ee casriga ah ee la socda paralaks, awoodda muuqaalka muuqaalka, muuqaalka MegaMenu, tifaftiraha MotoPress, MotoPress kaydırıcıyı və daha çox. PSD waxaa lagu daraa, sida waafaqsan xisaabinta semantik.
7. Xalka ugu sarreeya
Mawduucani wuxuu ku faanaa qalab kala duwan oo isku dhejiyo goobaha WordPress ee sida muuqata kufilan maaddaama ay ku mashquulsan yihiin, oo ay kuira jaan qaabka 100-boqolkiiba jawi wanaagsan, saamayga laquag va afgana lagaga menyusu. Horumar gaar ah oo loogu talagalay shirkadaha ganacsiga, waxay xoogga saartaa naqshadda dhismaha oo leh qurxiyo qurux badan oo loogu talagalay dareen casri ah. Mawduuca ayaa si buuxda loogu soo bandhigay talooyin ganacsi oo sawir leh, qaybta talobixinta, qaybta wararka, foomka kaararka müharibəsi, Google ya da hariidadaha. Naqshaduhu waa orta sahlan, haddana waxtar leh oo qasab ah.
Yükləmə: Talyaaniga yar
Mawduuca Dugsiga WordPress ayaa muhiimadda coaaad siinaya qaabka loo yaqaan ‘məlumatlı’, ya da fuddeynaysa isticmaalayaasha ina galaan macluumaad qala duwan. Bogga hore ayaa horay loo dhisay, halka wargeysyo badan iyo fursado badan oo menyu ah ay hubiyaan in si fudd loo heli karo dhammaan boggaga internetka. Mawduuca waa orta la dhammeeyo oo wuxuu ku darayaa naqshadda 100 bokolkiiba, qaraallada gaarka ah iyo məzmunu, saameyn culus oo caajis ah, saameyn isku orta ah, in ka badan 80 qawaniinta gaaban.
Çəkmə variantı: 2.3.1
Yükləmə: Qorsheynta Qoyska
11. Pivə zavodu
Iyadoo naqshadeeda 100-boqolkiiba, mavduucan gaarka ah oo dhamaystiran wuxuu isticmaalaa naqshad sameynta oo ah sida hurdiga ah sida ay tahay midfircoon. Sawirka geesiga ah ee weyn wuxuu soo bandhigaa sawirro muuqda oo sawir-qaad ah-ku-qanacsan muujinta sawirrada cuntada ama cabitaanka. Mawduucuna waxa kale oo uu leeyahay saamayn isku ortasi ah iyo culays yar.
Yükləmə: Tatu yaradıcı
13. Qorşaha toyu
Mawduuca Toy Planlayıcısı WordPress ayaa u oggolaanaya noocyo kala duwan oo noocyada kala duwan ee boostada coaababka boostada caadiga ah, wa diaar oo luqado badan leh, oa ku faantaa in 80% gaaban. Waxaa si fud loogu rakibi karaa laba talaabo oo fud, waxayna bixisaa noocyo kala duwan oo aan horay loo arag oo kala duwan, oo ay ku jiraan fursado badan oo midabo leh, noocyada qaabaynta, iya cajalado siajaad saad . Waxaa inta dheer, habka khaaska ah loo hubiyo in la wadaago wada-hadalka bulshada ya awood-siinta fikradaha.
Habboon: 13 Pragtige Bootstrap Pragtige WP Mawduucyada laga bilaabo Abuur Template
Habboon: 13 Beautiful Bootstrap Beautiful WP Mawduucyada laga bilaabo Abuur Կաղապար
Habboon: 13 Krásný Bootstrap Krásný WP Mawduucyada laga bilaabo Abuur Template